Imodyuli ye-ICE MBR Membrane yoNyango lwaManzi oNgcolileyo lweNkqubo yokuPholisa iNqaba
I-Membrane Bioreactor (MBR) luhlobo lwetekhnoloji ephezulu ephuhlisiweyo ukusukela ukuphela kwenkulungwane ye-20 eye yaqonda indibaniselwano efanelekileyo yetekhnoloji yokwahlula inwebu kunye netekhnoloji yebhayoloji. Itekhnoloji yokwahlula inwebu ithathe indawo yendlela yendabuko esebenzayo kunye neyunithi yesihluzo esiqhelekileyo; amandla ayo okwahlulahlula angenza i-SS turbidity ikufutshane ukuba ingabikho. Ixesha lokugcina amanzi nge-Hydraulic (HRT) yobudala bamadaka (SRT) lahlulwe ngokupheleleyo; ukuphuma kwamanzi kumgangatho olungileyo kwaye uzinzile oya kuthi usetyenziswe kwakhona ngaphandle kwonyango lwenqanaba lesithathu. Ngokwamanzi oqoqosho kunye nasebenza ngokukhuseleka okuphezulu, umda wesicelo sokurisayikilisha kwamanzi amdaka sandisiwe ngokubanzi.
Inkqubo ye-ICE Chemical Dosing yoNyango lwaManzi kwiNkqubo yokuPholisa iNqaba
Ukusebenza kwenkqubo yokupholisa kuchaphazela ngokuthembekileyo, ukusebenza ngokukuko, kunye neendleko zayo nayiphi na inkqubo yoshishino, yeziko, okanye yamandla ombane. Ukubeka iliso kunye nokugcina ulawulo lomhlwa, ukubekwa, ukukhula kwe-microbial, kunye nenkqubo yokusebenza kubalulekile ukubonelela ngokwandisa iindleko zokuSebenza. Inyathelo lokuqala lokufezekisa ubuncinci kukukhetha inkqubo efanelekileyo yonyango kunye neemeko zokusebenza ukunciphisa uxinzelelo lwenkqubo.
Inkqubo yokuCocwa kwaManzi ye-ICE yokuPholisa iNqaba yaManzi
Ukuthambisa amanzi yinkqubo yokucoca amanzi esebenzisa itekhnoloji yokutshintshiselana nge-ion ukususa iiminerali ezenzeka ngokwendalo ezinje ngecalcium kunye nemagniziyam emanzini ukuthintela ukwakheka kwemibhobho nakwizixhobo. Inkqubo isetyenziswa rhoqo kuseto lweshishini nakwimizi-mveliso ukulungiselela ukusetyenziswa ngokulula kunye nokwandisa ixesha lokusetyenziswa kwezixhobo zokuphatha amanzi.